Ahoana no hametrahana ny vokatra ao Amazon amin'ny alàlan'ny fanitsiana lisitra?
Ny mpividy Ecommerce rehetra mahomby dia tokony hahafantatra ny fomba hametrahana vokatra amin'ny Amazon. Amin'ny ankapobeny, rehefa tonga amin'ny fikajiana fikarohana lalindalina kokoa, dia rehefa miditra lalao ny fanatsarana ny votoaty. Ary ity fivarotana be olona ity dia tsy fiatoana eto. Noho izany, etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hametrahana ny vokatrao amin'ny Amazon - dia ny hitarika amin'ny fitadiavana vokatra any miaraka amin'ny lisitry ny vokatra tsara. Raha ny marina, ny tanjontsika fivarotana farany dia ny mametraka tsara ny fikarohana mpanjifa, sa tsy izany?
Ny fomba fametrahana ny vokatra amin'ny Amazon amin'ny lisitry ny lisitry ny vokatra
Tier One: Ny maha-zava-dehibe ny fikarohana ny sokajy
Raha jerena fa ny zavatra rehetra voatanisa ao amin'ny tsena an-tserasera dia tsy hita afa-tsy Amin'ny alalan'ny karoka fikarohana vokatra, ny teny fanalahidy napetraka ao amin'ny tranokala fikarohana dia mitana ny andraikitra lehibe amin'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazana. Izany no antony tsy tokony hahagaga anao fa ny fikarakarana fikarohana lalindalina momba ny fifaninanana dia ny zavatra voalohany tokony hatao. Ary ity ny fomba hametrahana ny vokatrao amin'ny Amazon amin'ny alàlan'ny fanalahidin'ny sokajy ankavanana - Manoro hevitra aho amin'ny fanombohana kickstart amin'ny Google Keyword Planer (raha te hanana ny sarin'ilay asa manontolo ary hahazo ny fahatakarana fototra momba ity raharaha ity), ary arahina amin'ny Fikarakarana fifaninanana azo ampiasaina amin'ny fampiasana iray amin'ireo fitaovana amin'ny safidinao (Manoro hevitra aho amin'ny fikarohana ScientificSeller, KeywordKeg, MerchantWords, AMZ Tracker, na Scope - izy rehetra dia tsara tarehy sy tsara ampiasaina - voaporofo ho an'ny Amazon product listing optimization).
Tier Two: Fanatsarana ny votoatin-kevitra ankapobeny amin'ny Amazon
Raha vantany dia efa vonona ny dobo filaminana, dia izao no fotoana hampiasanao azy ireo amin'ny tanjona fanatsarana. Alohan'ny hanombohanao, azafady mba hahatakatra ny fepetra ambaran'i Amazonia momba ny firafitry ny lisitra matanjaka, izay misy ny lohatenin'ny Product Title, Bullet Points, Product Description, ary Supporting Images.
Vokatra amin'ny vokatra:
Tokony hotanana mihoatra ny 200 tarehim-potoana.
Tokony hanome ny famaritana ny fepetra.
Mamela tarehimarika amin'ny isa fotsiny ihany.
Tsy ilaina ny mampiditra ny habe sy / na ny loko, raha tsy misy tsipiriany mahasoa na misy safidy maromaro azon'ilay mpanjifa.
Tokony ho madio foana sy mazava foana, aseho faran'izay haingana araka izay tratra.
Natao ny handraketana lisitr'ireo endri-javatra sy vokatra ankapobeny.
Tokony ho mendrika ampy mba hamaritra ny fampahalalana lehibe momba ny lanjany lehibe.
Raha ny marina dia mandeha lavitra kokoa ny lisitry ny lisitra fanazavana momba ny vokatra efa tafiditra amin'ny sainao.
Tokony handrakotra tanteraka ny angon-drakitra rehetra mifandraika amin'ny vokatra manontolo.
Natao hampifandanja ny tebiteby matetika ao amin'ny mpanjifa manao fihetsiketsehana.
Tokony ho tsy manam-paharoa, tsara kokoa, ary manan-karena amin'ny teny fototra tianao.
Azo inoana fa lasa mahery kokoa ny tenimiafina izay mivarotra ny vokatrao.
Ny sary voasoritra dia tsy misy intsony ireo sary sivy ampiana.
Azo antoka fa aleo kokoa kokoa ny votoaty hita maso momba ny kalitao tsara tarehy.
Ny fampiasana sary fampiasana sary, ary ny fomba fiainana sy ny fandefasana ny fonosana dia azo antoka fa ny vahaolana tsara indrindra entina mitondra ny vokatra ny vokatra vokatrao ary farany mitondra ny vokatra ara-barotra eo Source .